July 23, 2021 Xuseen 2
Puntlandtimes (Garoowe)-Golaha wakiilada dowladda Puntland ayaa maalinimada berri ah yeelan doona fadhigoodii 17aad ee kal-fadhiga 48aad, xilli ay fasaxii todobaadka kujireen maanta oo Jimce ahayd.
Fadhiga berri ayaa waxaa barlamaanka horyaal Ajandayaal dhowr ah oo uu horay u sii shaaciyey guddoomiyaha barlamaanka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil, xilli uu golaha fasaxayey Khamiistii la soo dhaafay.
Guddoomiye Jibriil ayaa horay u sheegay in soo laabashada madaxweyne Deni ay fududayn doonto soo dedejinta magacaabista musharixiinta xildhibaanad aqalka sare ee barlamaanka Soomaaliya ku matali doona deegaamada Puntland, ayna ka barlamaan ahaan diyaar u yihiin in doorashadu ku dhacdo sida ugu dhaqsaha badan.
Maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya,tan iyo wixii ka dan beeyey.
06/ November 2019 ( weerarkii Baarlamaan ka soo magacaabo) ee ay fuliyeen Booliska Garowe ,haljaasi oo ay ku dhinteen waar ka mud ah askartii ilaalada ka ahayd aqalka Baarlamaan ka la soo magacaabo ee Puntland.
Wixii markaasi ka danbeeyey waxa maamula golahaasi la soo magacaabo,
Abwasn oo uu soo magacaabay,oi runtii ah shaabad uu Deni isticmaalo,lafa na filankaro in uu isbedelo,waayo Deni waxa uu wax ku maamulaa laakuush iyo musumaasuq ,isagoo og in xildhibaanada ka soo magacaabo ay dantooda gaar ja meesha u joogaan,sidaasi darteed howshi was sidii loogo talagalay ha ku socoto uyo shinbirayahow heesa,
Puntland guul iyo in sharcigo sareeyo.
Weerarkii lagu qaaday dhalinyaradii Warsangali Somali maa illaawi doonto,aniga oo reer Gedo ah walahi in aanan ilaawi doonin.